600 Soomaali ah ayaa la filayaa in ay Borlänge timaado | Somaliska
[caption id="attachment_2254" align="alignright" width="300" caption="Xaliimo Maxamed iyo Kiin Yusuf waxay doonayaan in lala mideeyo caruurtooda iyo seygooda oo ku nool Kenya."] [/caption] Sida uu qoray wargeyska Dalarnas Tidningar waxaa la filayaa in 600 qof oo Soomaali ah ay yimaadaan magaaalada Borlänge ka dib marka Soomaalida loo furo in ay reerahooda la midoobaan. Maamulka kamuunka ayaa isku diyaarinaya soo dhaweyn dadkaas cusub iyo in loo helo guryo ku filan. "Waa in aan u diyaar garownaa" ayuu yiri Nils Gossas oo ka tirsan maamulka Kamuunka Borlänge. Nils Gossas oo kamuunka ugu jira xisbiga Miljöpartiet ayaa sheegay in ka dib heshiiskii dowlada iyo xisbigaas ay gaareen la filayo in shuruuda baasaboorka laga qaado Soomaalida oo DNA lagu badalo. Dadka soo galootiga ah ee soo degay Borlänge sanadkii 2010 ayaa 93% waxay ahaayeen Soomaali. Maamulka ayaa ka cabsi qaba in dadka cusub loo waayo guryo, iskuulo iyo in ay qarashka ku badiyaan kamuunka. Sidoo kale waxay ka cabsi qabaan in dadka cusub ay dulsaar noqdaan. Wargeyska ayaa sidoo kale wax ka qoray rajada Soomaalida magaaladaas ku nool iyo cabashooyinka ay ka qabaan shuruuda ay Sweden dul dhigtay Soomaalida. DT.se
600 Soomaali ah ayaa la filayaa in ay Borlänge timaado
Xaliimo Maxamed iyo Kiin Yusuf waxay doonayaan in lala mideeyo caruurtooda iyo seygooda oo ku nool Kenya.
Sida uu qoray wargeyska Dalarnas Tidningar waxaa la filayaa in 600 qof oo Soomaali ah ay yimaadaan magaaalada Borlänge ka dib marka Soomaalida loo furo in ay reerahooda la midoobaan. Maamulka kamuunka ayaa isku diyaarinaya soo dhaweyn dadkaas cusub iyo in loo helo guryo ku filan. “Waa in aan u diyaar garownaa” ayuu yiri Nils Gossas oo ka tirsan maamulka Kamuunka Borlänge.
Nils Gossas oo kamuunka ugu jira xisbiga Miljöpartiet ayaa sheegay in ka dib heshiiskii dowlada iyo xisbigaas ay gaareen la filayo in shuruuda baasaboorka laga qaado Soomaalida oo DNA lagu badalo. Dadka soo galootiga ah ee soo degay Borlänge sanadkii 2010 ayaa 93% waxay ahaayeen Soomaali.
Maamulka ayaa ka cabsi qaba in dadka cusub loo waayo guryo, iskuulo iyo in ay qarashka ku badiyaan kamuunka. Sidoo kale waxay ka cabsi qabaan in dadka cusub ay dulsaar noqdaan.
Wargeyska ayaa sidoo kale wax ka qoray rajada Soomaalida magaaladaas ku nool iyo cabashooyinka ay ka qabaan shuruuda ay Sweden dul dhigtay Soomaalida.
Haddii lacagi kaa lunto
Jamiilu Raxmaan says:
ASC. GABADHA MEESHA KUSAWIRAN HADEETAHAY XALIMO BARAFUUN HAA II SO QOR WALAAL ANAA KULA SOO XIRIIRAYE
ilaahay run hanooga dhigo waan ubaahanahay dadkeena
asc xaliimo barafuun waa ninaa isla aheeden suukhleeda bilaa caleeg meel lagaa helo iiso qor xaalada ayaa ka wareesan laaahey iyo xaafadi wlb twfq